ဥရောပမှာတော့မောင်းနှင်သည့်အခါကိုသိရန်အမှုအရာ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာတော့မောင်းနှင်သည့်အခါကိုသိရန်အမှုအရာ
အားဖြင့် Helen Jackson
သမိုင်းဝင်အထင်ကရနေရာများနှင့်နေရောင်ကနေအထိကြီးအမြင်များရာပေါင်းများစွာမှကမ်းရိုးတန်းကိုနမ်းနဲ့အတူ လိုဏ်ဂူတောင်များ, ဥရောပအမှန်တကယ်ကအားလုံးကိုရှိပါတယ်. ဒါဟာလမ်းခရီးစဉ်များအတွက်စုံလင်သောဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်နာရီနဲ့တစ်ဦးအမှု၌တယောက်ကိုတယောက်တိုင်းပြည်ကနေသင့်ရဲ့လမ်းစေရန်တတ်နိုင်သမျှဖြစ်သကဲ့သို့. ဒါဟာအစသွားလာကမ္ဘာ့အလုံခြုံဆုံးဒေသများ၏တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အီးယူမကြာသေးမီကအန္တရာယ်မောင်းနှင်မှုအဆင့်ဆင့်လျှော့ချရန်ပျက်ကွက်ကြောင်းသတင်းနေသော်လည်း, ပျမ်းမျှသေဆုံးနှုန်းနေဆဲကအစဉ်အဆက်ခဲ့သည်နိမ့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် (1 တွင် 49 သန်း).
ဒါဟာအငှားကားများနှင့် ပတ်သက်. အရပျ၌အခြို့သောမူဝါဒများနှင့်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ရကျိုးနပ်သည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းပြည်ထူးခြားတဲ့ဥပဒေများကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အစုံရှိပါတယ်. အဘယ်အရာကိုကတဦးတည်းနိုင်ငံတွင်ဿုံလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည် (ဂျာမနီရှိ Autobahn အပေါ်တစ်ဦးမြန်နှုန်းကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲမောင်းနှင်, ဥပမာ) အခြား၌မကျရမည်အကြောင်းတည်း, ဒါကြောင့်သင်တိုက်ကြီးအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းစေအဖြစ်လမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကချေ.
ဥရောပ၌ကားမောင်းနေစဉ်သင်အာမခံနှင့်ပြိုကွဲဖုံးရှိသည်သောအလွန်အရေးကြီးသည်က. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်ယူပြီးနေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် အာမခံကုမ္ပဏီ ဒီစီစဉ်ဖို့. သငျသညျကားငှားရမ်းသည့်အခါအာမခံများသောအားဖြင့်သင့်ရဲ့စာချုပ်အပေါ်သော့ခတ်နေသည်, အမှုအရာအနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်ရာ.
2) အပိုမျက်မှန်ပြီးတော့ contact lens ကိုယူခဲ့
သင်ညွှန်းမှန်ဘီလူးဝတ်ဆင်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်စပိန်မှတဆင့်တစ်ခကိုကားတစ်စီးကားမောင်းနေစဉ်သိခဲ့ပါ, သငျသညျများမှာ ခပ်သိမ်းသောကာလသင်နှင့်အတူဒုတိယ pair တစုံသယ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်? အခြားနိုင်ငံများကဤအကြောင်းကိုဒီထက်တင်းကျပ်များမှာ, သို့သော်အားလုံးအချိန်များတွင်သင်နှင့်အတူမျက်စိ wear တစ်စက္ကန့် pair တစုံသယ်ဆောင်ရန်ကောင်းသောအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်, သင်တို့ရှိသမျှသည်အန္တရာယ်များကိုသတိပြုမိကြသည်သေချာစေရန် သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်း သင့်ရဲ့အဓိကမျက်စိကိုချိုးဖျက်သို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးဖြစ်လာဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်.
ဒီတစ်ခုသိသာကြေညာချက်ကဲ့သို့အထင်နေစဉ်, သငျသညျအခြို့သောနိုငျငံမြားသောက်ယာဉ်မောင်းတစ်သုညသည်းခံစိတ်န့်သတ်ချက်ရှိသည်ကိုသတိပြုမိမည်မဟုတ်ပါ. ဒါကယာဉ်မောင်းသူတို့၏အသွေးသမျှအတွက်မဆိုအရက်ရှိသည်ဖို့ခွင့်မပြုထားကြသည်ကိုဆိုလိုသည်. ဥရောပကော်မရှင်အပေါ်အကွံဉာဏျကမ်းလှမ်း စံတို့၏အသွေးအရက်ကန့်သတ် တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းပြည်အတွက်. ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်, အဲဒါကိုပင်ပညတ်တရားကိုဆန့်ကျင် တစ်ဦးအချိုရည်သောက်ရ ကားမောင်းနေစဉ်. ဤသည်တင်းကျပ်သောပုံပေါ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင်ကမည်သည့်မျှော်လင့်မထားတဲ့ဒဏ်ငွေရှောင်ရှားရန်သွားရောက်ကြည့်ရှုတိုင်းပြည်ရဲ့ဥပဒေများလေးစားရန်အရေးကြီးပါသည်.
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း မှလွဲ., အိုင်ယာလန်, နှင့်မော်လ်တာ, အားလုံးဥရောပနိုင်ငံများတွင်လမ်း၏လက်ျာတော်ဘက်မှာကားမောင်း. ဗြိတိန်တွင်နေထိုင်သူများအဘို့, ဒီတန်ပြန်လက်ယာရစ်ဦးတည်နေတဲ့အဝိုင်းတွင်ညှိနှိုင်းနဲ့တူလေ့ကျင့်မှုလုပ်တာလဲအတော်လေးလှည်စေနိုင်သည်, ဒါကြောင့်ကိုထိန်းညှိဖို့အချိန်ယူထိုက်သည်. drivers အမြဲတမ်းညာဘက်ကိုကပ်နှင့်သူတို့ကြုံတွေ့ရအဝေးပြေးလမ်းမကြီး၏ဗဟိုလမ်းကြောင်းအတွက်တည်းခိုကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်. ကျော်တက်တဲ့အခါမှာ, အမြဲလည်းသင့်ရဲ့နောက်ဘက်အမြင်မှန်စစျဆေးဖို့သတိရ.
5) သင့်ရဲ့လမ်းမကြီးလက္ခဏာများတွင် Up ကိုတိုက်
ဥရောပလမ်းဆိုင်းဘုတ်များနားလည်ခြင်းသင်သည်လုံခြုံစွာသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိဖို့ကူညီပေးပါမည်နှင့်ပညတ်တရားကိုသင်တို့အားချိုးဖောက်ရှောင်ရှားရန်ကူညီပေးပါမည်. အများဆုံး ဥရောပခရီးစဉ် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မိမိကိုယ်ကိုရှင်းလင်းဖြစ်သောစံဆိုင်းဘုတ်ကိုသုံးပါ, ဒါပေမယ့်ဖောင်သို့မဟုတ်အရောင်အတွက်အသေးစားကွဲပြားခြားနားမှုရှုပ်ထွေးလေ့. ခရီးစတင်ခင်မှာ, you might want to familiarize yourself with the လမ်းဆိုင်းဘုတ်ထဲမှာမသိမသာကွဲပြားခြားနားမှု ဥရောပတစ်လျှောက်လုံး. အလွန်အနည်းဆုံး, ဒါကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အကူအညီဖြစ်စေနိုင်, မှာအများဆုံး, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်.
ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများကွဲပြားခြားနားသောသေဆုံးသူနှုန်းနှင့်သေဆုံးသူစုဆောင်းမှု၏နည်းလမ်းများရှိ. ပြင်သစ်မှာ, ဥပမာ, ကသေဆုံးသူတံခါးငွေသားနှင့်အတူဆပ်ဖို့နေဆဲလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. အခြားဒေသများသငျသညျအခြို့သောလမ်းများသုံးစွဲဖို့ပေးဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြသင့်ကားပေါ်တွင်တစ်ဦးစတစ်ကာဖော်ပြရန်ရန်သင့်အားတောင်းမည်. ဖြတ်သန်းခကိုသင့်ရည်ရွယ်ခရီးစဉ်၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်မည်သို့အလုပ်လုပ်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ် Familiarizing ဆိုပြစ်ဒဏ်များကိုရှောင်ကြဉ်ရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်.
ကောင်းပြီသင်အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုခံစားချင်တယ်ဆိုရင်, အဆိုပါစွန့်ခွာ မောင်းနှင်မှု၏လုပ်ရတဲ့, ရုံဥရောပ၌ရထားယူ, ဒီတိုက်ကြီးအတွက်လူတိုင်းရထားကိုသုံးပါ, နှင့်ကမ္ဘာရှိအခြားသောအရပ်တို့ကိုမမတူပဲ, တူသောက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူအွန်လိုင်းရထားလက်မှတ်တွေကိုဝယ်ခြင်းငှါအလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် တစ်ဦးကရထား Save, သငျတို့သအလွန်အကျွံစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲသဘာဝခရီးသွားလာခြင်းနှင့်တွေ့မြင်ရ.
ဥရောပကိုခံစားဖို့အဆင်သင့်? ရာသီဥတုသင်ကားမောင်းရှေးခယျြသို့မဟုတ်ရထားယူ, ကျွန်တော်တို့ကိုမှာသတိရ တစ်ဦးကရထား Save!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ဥရောပ၌မောင်းနှင်သည့်အခါကိုသိရန်အမှုအရာ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url =https://www.saveatrain.com/blog/things-to-know-when-driving-in-europe/ ‎– (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / fr ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#မောင်းနှင်မှု လက်ရန်းတန်း ရထား ရထားခရီးသွား
I work asapart time tour guide in Kent and blogs about the experience. Her favorite weekend activity isawalking tour in South West Coast of Bristol. She is alsoastrong advocate of sustainable lifestyle, and hopes to writeabook about it someday. She lives with her parents and her Frenchie named Coco - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ရထားအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွား, မီးရထားခရီးသွားလာအီတလီ, ဥရောပခရီးသွား
မီးရထားခရီးသွားလာဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, မီးရထားခရီးသွားလာလူဇင်ဘတ်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား